Martigalinta qaxootiga oo Uganda u horseedday horumar ganacsi - BBC News Somali
Penina waxa ay ka mid tahay dadka ganacsiyada yaryar ku haysta xerada Bidi Bidi
Uganda ayaa waxaa lagu qeexaa in ay ka mid tahay dalalka ugu wanaagsan ee adduunka ee qaxooti lagu noqdo, waxaana ugu wacan siyaasadaheeda soo dhaweynta ah qaxootiga. Balse sidee qofka u dhisi karaa noloshiisa isaga oo wax kasta oo uu haystay kaga soo tagay dalkii uu kasoo qaxay. Wariyaha BBC-da John Murphy ayaa u kuurgalay
"In ganacsi la bilaabo ma ahan arrin sahlan, sababtoo ah waxaa adag in marka horeba aad lacag hesho" ayay tiri Penina oo ka mid ah dadka halkan qaxootiga ku ah oo kasoo qaxay dalka Suudaanta Koonfureed. Waxa ay leedahay meherad dumarka lagu qurxiyo oo ku taala Waqooyiga Uganda.
Penina waxa ay sheegtay in macaamiisheeda aysan lacag haysanin, marka ay wax iibsanayaane ay kaga badashaan raashiinka beeraha uga soo go'ay.
Hogaamiyiha fallaagada Ugandha oo la maxkamadeeyay
Dowladda Ugandha oo u digniin siisay warbaahinta
Waxa ay haysataa afar carruur ah, mana aysan doonaynin in ay dalkeeda kasoo qaxdo illaa markii ay aragtay dumar iyo carruur la dilay. Ninkeeda oo ay dalkii uga soo tagtay ayaysan ka warhaynin waxa uu hadda ku suganyahay, taleefoonkii uu haystayna ma ahan mid dhacaya.
Sida ay sheegtay hay'adda Qaramada Midoobay ee UNHCR, boqolkiiba 85% qaxootiga halka milyan ka badan ee reer Suudaanta Koonfureed ee Uganda ku nool ayaa waxa ay yihiin dumar iyo carruur. Waxa ay inta badan caawimaad ka helaan hay'adaha caalamiga ah iyo dowladda Uganda.
Waxaa la siiyay dhul ay guri ka dhistaan, iyo jiingad ay guriga saartaan, sidoo kalana dhul yar oo ay qudrad ku beeran karaan.
Balse inta badan qaxootiga waxa ay ka cabanayaan in raashiinkii la siin jiray aad loo dhimay, waxa hadda la siiyana uusan bisha gaarsiinin. Hase yeeshee dadka y Penina ka mid tahay waxa ay u baxsadeen xirfadooda shaqo.
Qaxootiga ku qulqulaya Uganda
Tiradii ugu badnayd ee qaxooti ah waxa ay Uganda tageen sanadkii 2016-kii sida ay muujinayso tirakoob ay samaysay Qaramada Midoobay.
Dadka ugu badan oo gaaraya 489,000 qof waxa ay ka yimaadeen dalka Suudaanta Koonfureed, halka kuwa ugu yar oo dhan 18,600 ay ka yimaadeen dalka Burundi.
Wax ka badan rubuc malyuun qof waxa ay ku noolyihiin xerada qaxootiga Bidi Bidi. Dad ka badan kuwii gudbay badda Mediterranean ayaa soo galay dalka Uganda sanadkii 2016-kii.
Ganacsiga kor u kacaya
Wiil lagu magacaabo Cabdikarim Cali oo 25 jir ah oo Uganda u dhashay ayaa xaabo ku iibiya xeradan qaxootiga, wuxuuna BBC-da u sheegay in ganacsigiisa yar uu u bulaalay. Waxa uu ka mid yahay dad badan oo reer Uganda ah oo fursado shaqo iyo kuwa ganacsi ka helay qaxootiga tirada badan ee halkan ku sugan.
Qaxootiga qaar ayaa sii iibiya raashiinka ay UNHCR siiso si ay ugu badashaan waxyaabaha ay u baahanyihiin, balse taas waa sharci darro, haddii booliiska ay qabtaana waa xarig.
Iyada oo ay yartahay saansaanta muuqata ee ah in nabad ay kusoo laabato Suudaanta Koonfureed, waxa ay qaxooti kusii ahaan doonaan Uganda, waxayna ku qasbanyihiin in ay noloshooda yagleelaan.